मोदीलाई मन फुकाएर स्वागत र सत्कार किन? :: PahiloPost
मोदीलाई मन फुकाएर स्वागत र सत्कार किन?
10th May 2018, 05:07 pm | २७ बैशाख २०७५
नलेखुम् भनेको लेखुम लेखुम लाग्यो। सामाजिक सञ्जाल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमय भएको छ। नाकाबन्दीबाट हामी नेपालीले भयानक दुःख पाएको कटु सत्य हो। त्यो अमानवीय काम थियो। त्यसमा कुनै इफ, बट, किन्तु वा परन्तु हुनै सक्दैन। यस्तो क्रम अब दोहोर्‍याउन पाइँदैन। नदोहोर्‍याउनका लागि हामी आफैं पनि आत्मनिर्भर बन्दै जानुपर्छ। यो दुःखलाई 'इख'का रुपमा लिएर हामीले समृद्धि हासिल गर्ने अठोट गर्दै त्यसको प्राप्तिको बाटोतर्फ लाग्नुपर्दछ।
मोदीको शुक्रबारदेखि हुने भ्रमणकै कुरा गर्दा, उनी छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन्। उनी अहिले नेपाल र नेपालीका पाहुना हुन्। हामी अतिथिलाई भगवान सरह मान्छौं। त्यो हाम्रो संस्कार पनि हो। त्यसैले पहिला जे जस्तो भए पनि अहिले खुला दिलले उनको स्वागत गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो घरमा कोही पाहुना आउन लागेको छ वा आइसकेको छ, तर हामी घरका मान्छे चाहिँ आपसमा झगडा गर्‍यौं वा विभाजित भएर एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्‍यौं भने कस्तो सन्देश जान्छ? निश्चय नै त्यसले पाहुनाको बेइज्जत हुँदैन घरवालाकै बेइज्जत हुन्छ। त्यसैले भ्रमणका बेलामा देश र जनतालाई नकारात्मक असर पर्ने हदसम्मका कुनै गतिविधि नभएसम्म आफ्नाहरुलाई नै एक आपसमा गाली गलौज गरेर आकाशतर्फ फर्केर थुक्ने काम पनि नगरौं। त्यसो गरे आफैंलाई थुक पर्छ, नमजा हुन्छ।
त्यसैले घरभित्रै केही कमजोरी देखिएका छन् वा कमजोरी हुन लागेका छन् भने 'गल्ती नगर' भनेर आन्तरिक रुपमै सचेत गराऔंं। गल्ती हुन नदिन के गर्ने भनेर परामर्श गरौं। तर, सार्वजनिक गाली गलौजमा हामी नउत्रिऔं। उत्रिएमा हामी आफैं कमजोर मात्रै हुन्छौं।
नाकाबन्दीपछि मोदी पहिलोपटक नेपाल आउन लागेका हुन्। तर, हाम्रा तीन भाइ (केपी ओली दुई पटक अनि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा एक/एक पटक) प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीको मेजमान यस अघि नै खाइसकेका छन्। छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएर अमानवीय कार्य गरेको भए पनि जनता र देशका प्रतिनिधिका रुपमा गएका हाम्रा तीन भाइको सम्मानमा कुनै कन्जुस्याईं गरेको देखिएन।
अझ ओलीको पछिल्लो दिल्ली भ्रमणका क्रममा मोदीले नेपाली भाषामा ट्विट गरेर स्वागत गरेका थिए। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हिन्दी भाषामा त्यसो गरे भने यहाँ उनलाई प्रधानमन्त्रीको जागिर उठी खाउँ कि बसी खाउँ हुन्छ होला। तर, उता केही भएको देखिएन।
हामीलाई मात्रै होइन भारतलाई पनि आपसी सम्बन्ध राम्रो नभइ भएको छैन र मतभेद पनि छन्। अन्तिम सत्य यही हो। दुई देशबीचका केही अवयवहरु यस्ता छन् कि तिनले न टाढा हुन दिन्छ नत शंकारहित नै। त्यसैले मुलुक र मुलुकवासीको अहित हुने गरी गलत संझौता नहुन् भनेर हामीले अहिले हाम्रो सरकारलाई सचेत गराउने हो।
'स्वागत नै नगर' वा 'अपमान गरेर पठाउ' भन्न मिल्दैन। गरियो वा भनियो भने त्यसले हाम्रै सभ्यतालाई गिज्याउने काम हुन्छ। उदाहरणका लागि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम हेरौं। उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति दक्षिण कोरियाको सीमाभित्र छिरेर शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ता गर्दा कसरी विश्वले वाहवाही गर्‍यो? कोरिया प्रायदीपमा सन् १९५३ देखि रहेको तनावलाई यो वार्ताले सकारात्मक मोडमा ल्याएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले ‘यो शत्रु मेरो देशमा आयो, यसलाई एक थप्पड हानेर पठाउँछु’ भनेको भए अनुमान गरौं त दक्षिणको छवी विश्वमा अहिले के हुन्थ्यो होला?
अझ नेपाल र भारतको सम्बन्ध त त्यस्तो पनि होइन। सम्बन्ध बहुआयामिक छ। सरकार – सरकार झगडा गर्दा जनता – जनता मिल्ने अवस्था पनि छ। नाकाबन्दीकै समयमा पनि हामीप्रति सहानुभुति राख्ने भारतीयहरु कम थिएनन्। त्यसैले भावावेशमा आउनु एउटा कुरा हो। व्यवहारिक नबनी सुखै छैन।
जहाँसम्म मोदी सिधै जनकपुर गए भन्ने कुरा छ त्यो त्यति ठूलो कुरा चाहिं होइन। तथापि, नेपालको हकमा संवेदनशील कुरा पनि हो।
त्यसलाई नजिकबाट 'वेट एण्ड सी' मै राखौंला। बिग्रिहालेको केही छैन। नबिग्रिएसम्म आफैबीच झगडा गरेर उर्जा खेर फाल्ने काम नगरौं। नेपालको हकमा पहिलो घटना भए पनि विश्वमा यस्ता घटना धेरै छन्। मोदीले तीर्थाटनका क्रममा के कस्ता प्रस्तुती गर्छन् त्यसपछि मात्रै धेरै कुरा भन्न सकिएला। चीन र भारतबीच दोक्लाममा केही अघि डरलाग्दो तनाव थियो तर चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री केही साता अघिमात्रै चीनको राजधानी भन्दा बाहिर नै भेटे। चीनले कुटनीति नबुझेको होला र?
भारत भ्रमण गर्ने विभिन्न देशका प्रतिनिधिले नयाँ दिल्ली नआइ मुम्बई, बैंगलोर वा हैदरावादको पहिले भ्रमण गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। म्यान्मार र मरिससका राष्ट्रपतिले केही दिन बिहारमा बिताएर दिल्ली गएको हामीले देखेका छौं। त्यसैले यसलाई त्यति धेरै महत्व दिनु जरुरी देखिँदैन।
जहाँसम्म भ्रमण अघिका केही गतिविधिका कुरा छन् त्यसमा पक्कै केही कमी कमजोरी देखिएका छन्। ती कुरा आन्तरिक रुपमा हामी आफैं पछि संवाद गर्दैगरौंला। अहिलेलाई निसंकोच मोदीको स्वागत गरौं। उनले के भन्छन्, कस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो हेरौं। त्यसपछि थप प्रतिक्रिया जनाउँला। के यसो गर्नु बेठीक होला त? विदेश मामिलालाई झण्डै अढाइ दशक नजिकबाट नियालेको हिसाबले यो पङ्तिकारको हृदयले भन्छ –मुलुक र हामी मुलुकवासीको हित यसैबाट हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका गतिविधिले अर्को एउटा सन्देशपनि प्रवाह गरेको छ जुन हामी नेपालीलाई राम्रै पनि हो। त्यो भनेको ‘खबरदार शासकहरु तिमीहरुका गतिविधि हामी हेरिरहेका छौं। गल्ती गर्न पाउँदैनौं।’ यो प्रतिपक्षीय भूमिका र खबरदारी सत्तामा रहनेका लागि पनि फाइदाकै विषय हो। किनकि उनीहरु गल्ती गर्नुभन्दा अघि सयचोटी सोच्न बाध्य हुनेछन्।
मोदीलाई मन फुकाएर स्वागत र सत्कार किन? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।